အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: စားနေတာ အသက်ရှင်ဖို့လား...?
ကိုယ်အခု တနေ့ ကို
ကိုယ်ဒီလိုစားနေချိန်မှာ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ငတ်နေလဲ?
ဒီမေးခွန်းတွေ က ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးမိတာပါ
ကိုယ့် ကိုသူငယ်ချင်းတယောက် က အီးမေးလ်ကနေပို့ပေးတာပါ
ကိုယ်တချိန်မှာလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်အတွက် ရည်းမှန်းချက်၊
သန္ဓိဋ္ဌာန်(စာလုံးပေါင်းမသေချာပါ ပြင်ပေးကြပါ) ပိုသေသေချာချာကျသွားတယ်
ပြီးရင် အတူတူ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြတာပေါ့
ရန်ခုန်သံချင်းထပ်တူ ကျသူတွေ ကို တချိန်မှာ လုပ်ဖြစ်ရင် လက်တွဲလုပ်ချင်ပါတယ်
ဒီဘ၀ မှာ ကံပါလို့ခင်ကြသလို နောင်ဘ၀ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင်လဲ ကံပါချင်ပါသေးတယ်
Posted by တီချမ်း at 11:29 PM
mgnge April 16, 2009 at 3:47 AM
သြော်တီချမ်းရယ်...။ ဒီလို ပဲပေ့ါလူ ဆိုတာ ..တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘ၀အကျိုးပေးမတူ ညီကြတော့လည်း.. အတွေး ကိုယ်ဆီရှိကြတာပေ့ါ...။
ကိုယ်အသက်ရှင်နေစဉ်မှာတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်ချင်းစာ တစ်ရား ထား မယ်ဆိုရင် လောကကြီးကို ကောင်းကျိုးပြုနိုင်မှာပါ..။
လို အပ်တဲ့နိုင်ရာ တိုင်း ကို ကိုယ် က မဖြည့်ပေးနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ဖြည့်နိုင်တဲ့ နေရာ မှန်သမျှတော့ အနည်းနဲ့ အများ တတ်နိုင်သ လောက် ဖြည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေ့ါ.......။
အတွေးဆိုတာက လည်း တွေးမိသလောက် ဘယ်သူ မှလိုက်မလုပ်နိုင် ပါဘူး...။
မျက်စေ့တစ်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့ ပြောနေမယ့် အစား မျက်တောင်တစ်ဆုံး အတွင်း ကို တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ကြတာပေ့ါ...။ ကျွန်တော် က နောက်သံသယာ အထိ ဘာဖြစ်ပါစေမတွေး ဘူး..။ဒီ ဘ၀မှာအကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်တော့ နေချင်တယ်..။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ (ဥပမာ- နောက်ဘ၀ ကျွန်တော်က နူနာကြိုးကန်းနေတဲ့သူဖြစ်ပြီး တီချမ်း ကသမ္မ တကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့...။အခု ဘ၀လို မျိုး သာ ခင်နေကြမယ်ဆိုရင် တီချမ်းအတွက် ဘယ်ဖြစ်မလဲ..။ အဲ့ဒါကြောင့် နောက် ဘ၀ အထိတော့ ကို ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့သူတွေကို ဆွဲ မခေါ်သွားချင် ဘူး..။ ) ဒီ ဘ၀ အသက်ရှိနေသမျှတော့ ခင်မင်သွားချင်တယ်..။
အန်တီချမ်း April 16, 2009 at 8:25 AM
ဪ မယ်ငေါင် မယ်ငေါင် ဖိုးစိန်ပိုစ့်ထဲ က ဆုတောင်းမှားတွေ လာပြောနေတယ် ကိုယ်က သမ္မတ ကတော် ကြီးဖြစ်လဲ လေဒီ ဒိုင်ယာနာ လိုပြည်သူနဲ့ တသားထဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ် မင်းသာ နူနာကျိုးကန်း ဖြစ်လဲ ကိုယ့် ကို ခင်နိုင်အောင်ကျိုးစားပါ
အန်တီချမ်း April 16, 2009 at 8:27 AM
ကိုယ်တို့ အတွေးနည်းနည်းတော့ ကွဲပေမယ့် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မန့်ပေးတဲ့အတွက်တော့ ကျေးဇူးပါနော်
တီလေးရယ် ....... ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်ဘူး။ ဘ၀အကျိုးပေး၊ ကံအကျိုးပေး မတူညီကြတဲ့ ဘ၀မှာ တရားမျှတမှုဆိုတာလည်း မရှိသလိုပဲနော်။ ချို့တဲ့ကြတဲ့လူတွေကြတော့လည်း ဘ၀ကိုဒီလိုပဲ သူတို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်။ ပေါများတဲ့လူတွေကြပြန်တော့ လောဘကို အတောမသတ်နိုင်ကြဘူး။ ဘယ်လိုဘ၀မျိုးမှာပဲရောက်ရောက် ကိုယ်ချင်းစာတရားကို လက်ကိုင်ထားပြီး လူလူချင်း ညှာတာစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နေရာတခု၊ အတိုင်းအတာတခုကနေ ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကို တိုင်တောင် ဘာဖြစ်မယ်မှန်း ကြိုတင်မသိနိုင်တဲ့ လောကကြီးမှာ လက်ရှိအချန်မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့။ သံသယာ အကျိုးအတွက်တော့ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့ အဆုံးအမသာလျှင် အားကိုးရာပေါ့ တီချမ်းရယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပိုစ့်လေးအတွက်တော့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
အန်တီချမ်း April 16, 2009 at 8:53 AM
ဘာသာပြန်ပြီးထည့်ပေးချင်ပေမယ့် ရသ ပေါ့သွားမှာစိုးလို့
ဒီပိုစ့်လေးကတော့ ရေးရင် လဲ စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်
နင်ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုပြီတော့
Anonymous April 16, 2009 at 9:20 AM
ဘာ ပြော ရ မှန်း တောင် မ သိ တော့ဘူး ဟာ
ငို ချင် စိတ် တောင် ပေါက် သွား တယ်
နယ် စပ် က မြန် မာ တွေ လား ဟေ ????
ငါ တို့မြန် မာ တွေ မ ဟုတ် လောက် ပါ ဘူး နော်
တ ခေါက် တုန်း က လည်း e-mail ထဲ က နေ ကြည့်လိုက် ရ တာ
အ စာ ငတ် နေ တဲ့အာ ဖ ရိ ကန် က လေး လေး ကွင်း ပြင် ပေါ်ဒ၇ွတ် တိုက် သွား ပြီး ၊ World Food Organization ၇ှိ တဲ့စီ ကို ရောက် အောင် သွား နေ တာ ကို အ နောက် က နေ လင်း တ က အ သင့်စောင့်နေ တဲ့ပုံ ကို ၇ိုက် ပြ ထား တာ တ ကယ် ရင် နင့်စ ရာ ။ အ ဟုတ် အ မှန် လား ၊ တ မင်သက်
သက် ၇ိုက် ပြ တာ လား တော့မ သိ။
အန်တီချမ်း April 16, 2009 at 2:10 PM
တကယ့် အဖြစ်အပျက် ကို နည်းနည်း ဇာတ်ပိုနာအောင်ရိုက်ပြထားတာပါ
ဒါပေမယ့် အဲတာ တကယ်ဖြစ်နေတာလေ
အင်ဒိုထင်တယ် ဘဟာဆာ လိုပြောတာကိုး
နင်ပြောတဲ့ ကလေးပုံ က ဓါတ်ပုံဆု ရပြီး ဓါတ်ပုံဆရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားတာလေ အဲဒီပုံတွေ ရိုက်ပြီးတော့............
Phyo Maw April 16, 2009 at 2:59 PM
ခုတော့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို စဉ်းစားနေတယ်။
လုပ်သင့်တာနဲ့ လုပ်ချင်တာ ၁ခု ၂ခု လောက်
ဖိုးစိန် April 16, 2009 at 9:04 PM
သဇင်ဏီ April 17, 2009 at 9:08 AM
ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားစရာ တစ်ပုံကြီးဖြစ်သွားရော =(
sweetpeony April 17, 2009 at 9:44 AM
ဘာပြန်ပြောရမလဲ မသိအောင်ကို ခံစားရတယ် တီရယ်..
သေခြာတာကတော့ လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရဦးမယ် ဆိုတာပဲ.. ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာပေါ့...။
နန်းညီ August 17, 2009 at 2:09 PM
ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး.. ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး.. မသိဘူး ..